Njikwa Ego Na-eweta Ego Iji Jikwaa Ego ezumike Ezumike Gị
atụmatụ » Njikwa Ego
Oke uru nke ndị na-elekọta mgbazinye ezumike na ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ na-adabere kpamkpam n'ịpịpụta penny ọ bụla ikpeazụ site na ụbọchị kachasị elu iji nweta akwụkwọ ndị ahụ na-atọ ụtọ. Agbanyeghị, ịtọ ntọala na ijide n'aka na ekesara ha n'oge ọ bụla n'ahịa ahịa niile gụnyere ebe nrụọrụ weebụ na-edebanye aha mmadụ nwere ike, oge ụfọdụ, na-ama aka.
Ọzọkwa, dị ka ọnụ ọgụgụ nke ihe onwunwe n'okpuru njikwa na-etolite, ọnụego ntọala na-amalite ịmalite oge nchịkwa na-arịwanye elu. Ọnụahịa ndị ọbịa na-ere ihe maka ịdabere na ọnọdụ ahịa na-agbanwe ngwa ngwa ma nwee ike ịgbanwe nke ukwuu dabere na ọtụtụ ihe. Ọ na-esiri ndị na-enweta ego na-esiri ike iwepụta ozi ha chọrọ na sistemụ Njikwa Ngwongwo. Enweghị enweghị KPI na-adị mfe ịnweta na-egbochi arụmọrụ nke njikwa ego.
Kedụ ka Ngwá Ọrụ Nchịkwa Ego Zeevou nwere ike isi nye aka?
Zeevou Sell na-enye gị ohere ịtọ ọnụego gị n'etiti, yana kesaa ha n'ofe Ogwe 200 na ozugbo, ka ha na-egosi na gị onwe gị Akwụkwọ ntinye akwụkwọ. Enwere ike ịtọ ọnụego n'ọtụtụ maka ụdị ụdị otu n'otu oge ma ọ bụrụ na ịnwere otu usoro ọnụahịa gafee akụrụngwa. Enwere ike ịkọwa ọnụahịa ụbọchị nke izu maka oge enyere, na enwere ike ịtọ oge pere mpe na nke kachasị.
Ọzọkwa, ọrụ ịtọ ntọala ọnụego buru ibu nke Zeevou na-enye gị ohere ibugo ọnụ ahịa maka njirimara niile dị na obodo enyere maka ụbọchị kachasị elu, iji zụta gị oge iji chee echiche nke ọma gbasara ọnụego ịchọrọ ire ụdị nke ọ bụla maka ụbọchị ndị ahụ kachasị elu. All udu na-setịpụrụ nwere ike anya dị ka a na ndepụta, ma ọ bụ na multi-ọnụego ọnụego & nnweta Kalinda. Zeevou na-enyekwa gị ohere ịtinye mgbakwunye maka ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ, yana ịmepụta nkwalite na ma ọ bụ na-enweghị koodu ego maka iji nweta ndenye aha.
Ikwesiri ichikota nlekota oru na nhazi onu ahia site na ngwa onu ahia di nma kari ihe Airbnb ma ọ bụ onyinye VRBO, ị nwere ike ịdebanye aha ya na otu n'ime ndị mmekọ ọnụahịa ọnụahịa anyị na-agbanwe agbanwe dịka Gafere Pnye ọnụahịa or Ahịa. Nke a na - enye gị ohere iji machiini ntọala nke ọnụego gị, ma nwee ndị a na - agbanye na Zeevou. Mgbe ahụ, anyị na-ekesa ọnụego ndị a na weebụsaịtị gị maka ntinye akwụkwọ ozugbo, yana ọwa ọ bụla ị mejupụtara Zeevou iji iji njikọta API 2-way.
Zeevou na-enyekwa ụfọdụ akụkọ iji kwe ka ndị njikwa ego na-arụ ọrụ nke ọma. Na mgbakwunye na akụkọ ire ahịa, ndị ụsụụ ndị agha nwekwara ike iji akụkọ Pasent Oge Occupancy maka akara agba, ngosipụta anya nke ọkwa obibi maka ụbọchị ọ bụla, yana ụfọdụ Ngosipụta Igosi Ọrụ nke ọnwa. Ọzọkwa, Monthly Profit Report na-enye ndị ọbịa ohere inyocha uru ha na ego ndị nwe ha na-enweta, si otú a na-enyere ha aka ịhazi ọnụahịa ha na-aga n'ihu.